China simbi pfuti fekitari uye vagadziri TAA
Kemikari Kuumbwa C 0.85-1.20%
Kuoma HRC 40-50
Microstructure Homogeneous Yakatsamwa Martensite kana Troostite
Kuwandisa .2 7.2g / cm3
Fomu rekunze Idenderedzwa
Makomba machena <10%
Screen Nha. Inch Screen saizi S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930
6 0.132 3.35 Zvese zvinopfuura
7 0.111 2.80 Zvese zvinopfuura
8 0.0937 2.36 Zvese zvinopfuura ≥90%
10 0.0787 2.00 Zvese zvinopfuura Zvese zvinopfuura ≥85% ≥97%
12 0.0661 1.70 Zvese zvinopfuura ≤5% ≥85% ≥97%
14 0.0555 1.40 Zvese zvinopfuura ≤5% ≥85% ≥97%
16 0.0469 1.18 Zvese zvinopfuura ≤5% ≥85% ≥97%
18 0.0394 1.00 Zvese zvinopfuura ≤5% ≥85% ≥96%
20 0.0331 0.850 Zvese zvinopfuura ≤10% ≥85% ≥96%
30 0.0232 0.600 Zvese zvinopfuura ≥85% ≥96%
40 0.0165 0.425 Zvese Pass ≥85%
Blast kuchenesa: Inoshandiswa pakutsvaira kwekuchenesa kukanda, kufa-kukanda, kugadzira jecha kubviswa kwekukanda, ndiro yesimbi, H mhando simbi, simbi mamiriro.
Ngura kubvisa: Ngura kubviswa kwekukanda, kugadzira, simbi ndiro, H mhando simbi, simbi mamiriro.
Kupfura peening: Kupfura peening yegiya, kupisa kwakarapwa zvikamu.
Jecha nenyunje: Sand nenyunje pamusoro Profile simbi, chikepe bhodhi, simbi bhodhi, simbi zvinhu, simbi mamiriro.
Pre-kurapwa: Pre-kurapwa kwepamusoro, simbi bhodhi, chimiro simbi, simbi mamiriro, usati waveza kana kupfeka.
Pashure: Fekitori Yemahara sampuro Cast Simbi Shot S280 0.8mm - Simbi Grit - TAA
Zvadaro: Simbi Grit
Simbi yesimbi yakapfura, yakakanda chiwanikwa pfumo, Shot Blast Simbi Bhora, Simbi Shot Blast
Kanda isina simbi Shot Blast Midhiya, S550long Hupenyu Kanda Alloy Simbi Shot, Simbi Shot Kukuya Zvinhu
Yakakanda Simbi Shot S460, Yakakwira Carbon Simbi Shot S390 1.2mm, Yakakwira Carbon Yakakosha Simbi Pfuti, S390 Yakakwira Carbon Simbi Pfuti
Kanda Simbi Shot S660 2.0mm, Kanda Simbi Shot S280 0.8mm, Chilled Simbi Shot S280 0.8mm, Kanda Simbi Pfuti Yepamusoro Kuchenesa
Yakakwira Carbon Simbi Yakapfura
Metal hasha Simbi bara S280
Metal Surface Kurapa Yakakanda Simbi Pfuti, Yakakwira Tenacity Yakakanda Simbi Shot, Yakakwira Carbon Hasha Simbi Kupfura, Sae Yakadzika Simbi Shot S550
Akapfura Bead nenyunje
kupfura blasting midhiya, kupfura blasting hasha, Sae 170 Cast Steel Shot, Sae Stanadrd Kukanda Simbi Shot ，
Simbi Hasha Simbi Shot 330
Steel akapfura hasha
Simbi Shot Ballast, Steel Shot Mutengo, vhiri nenyunje hasha, simbi yakapfura hasha, nenyunje simbi bara
Simbi Yakapfura Zviyero
Simbi Yakapfura Peening
Simbi Shots Uye Grits, Grit Inotsemura Isina Simbi Shot, Simbi Shot Pellets, Simbi Shot Midhiya, Sand Blasting Grit Simbi Shot,
Inofananidzwa neyechinyakare simbi grit inogadzirwa nekupwanya simbi kupfura, kutakura simbi grit ine zvinotevera Zvimiro: Raw Chishandiso Kutakura simbi grit inogadzirwa neChromium inotakura simbi iyo ine yakaoma kuomesa kugona nekuda kwayo kwakanyanya zvemukati zveChromium. Technology Kubereka simbi grit inoitwa nekupwanya iyo yakakwenenzverwa inobereka simbi yakananga iyo isina kukanda kuremara. Yakaderera kupfeka Iyo inoumbwa nyika inotakura simbi grit ine yakapinza micheto ine ...
Zvimiro * Inogona kushandiswa kutsiva akasiyana siyana emamineral sands & asiri-esimbi abrasives, senge corundum, silicon carbide, arenaceous quartz, girazi marozari, nezvimwewo. * Inogona kutsiva chikamu cheyekunhonga maitiro. * Yakadzika guruva kuburitsa uye yakanakisa yekushandira nharaunda, ichideredza kurapwa kwekunhonga tsvina. * Low nzwisisika mutengo, hupenyu hwebasa iri makumi masere kusvika zana nguva iyo ...
Chigadzirwa chinoratidza Yakanyanya kusimbisa, kukwirira kwakasimba, hupenyu hurefu hwebasa. Kuputsa kwakaderera, guruva rakadzika, kusvibiswa kwakadzika. Kuderera kupfeka kwemidziyo, hupenyu hwakareba hwechishongedzo. Deredza dedusting system mutoro, regedza mashandisiro nguva yekurasa zvigadzirwa. Unyanzvi tsananguro Yemakemikari Kurongeka% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S -0.05% P ...
Kuoma Kunowanikwa: GP: HRC46-50 Zvichangogadzirwa zvigadzirwa zvine angular, iyo grit inokomberedzwa zvishoma nezvishoma mukushandisa uye inonyanya kukodzera oxide ganda pre-kurapwa. GL: HRC56-60 Yakaomarara kupfuura GP simbi grit, zvakare inorasikirwa nemipendero yakapinza panguva yekupfura basting uye inonyanya kukodzera kumeso ekugadzirira kunyorera. GH: HRC63-65 Kuomarara kwepamusoro, makona akapinza anoramba ari panguva yekushanda, anonyanya kushandiswa kumanikidza mweya kupfura blasting equipm ...